Chelsea Oo Daafac Khabiir Ah Loo Bandhigay, Liverpool Oo Laba Xiddig Laga Fasaxayo & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga - Gool24.Net
Chelsea Oo Daafac Khabiir Ah Loo Bandhigay, Liverpool Oo Laba Xiddig Laga Fasaxayo & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaysa wararkii ugu danbeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda maanta oo Khamiis ah:
Tababaraha Tottenham ee Jose Mourinho ayaa doonaya inuu garabka weerar ee Real Madrid ee Gareth Bale oo 31 sano jir ah dib ugu soo celiyo Premier League. (Cuatro – in Spanish)
Paris St-Germain kabtankeeda daafaca dhexe ah ee Thiago Silva oo 35 sano jir ah isla markaana PSG ka tagaya kaddib Final-ka Champions League ayaa saxeexiisa Chelsea loo bandhigay. (Telegraph – subscription required)
In heshiiska shaqsiga ah ay isku raacaan Man United iyo Jadon Sancho ayaa ah caqabada hortaagan in Sancho uu Red Devils u wareego. (ESPN)
Arsenal ayaa qarka u saaran saxeexa 22 sano jirka daafaca dhexe ee Lille ee Gabriel, Gunners ayaa kalsooni ku qaba inay heshiiskaas oo 27 Milyan oo Pound ah toddobaadkan ku dhawaaqaan. (L’Equipe – in French)
Chelsea ayaa heshiis shan sano ah gudaha toddobaadkan kula saxeexan karta Kai Havertz oo 21 sano jir ah haddii ay iyaga iyo Bayer Leverkusen yareeyaan farqiga 18-ka Milyan ee Pound ah ee u dhaxeeya. (Telegraph – subscription required)
Manchester United ayay suurogal tahay inay goolhayaha kooxdeeda ee Sergio Romero oo 33 sano jir ah u bandhigto Aston Villa heshiis ay kaga doonayaan kabtankooda Jack Grealish. (Mail)
Leeds United ayaa dalabkii saddexaad oo la aaminsan yahay inuu 25 Milyan oo Pound yahay ka gudbisay 22 sano jirka daafaca dhexe ee Brighton ee Ben White. (Sky Sports)
Wolves ayaa rajaynaysa inay dhegaysan doonto dalabaadka waaweyn ee u imanaya garabkeeda weerar ee Adama Traore walow heshiiska 24 sano jirkaas ee gegida Molineux saddex sano ka hadheen. (Mail)
Chelsea iyo Atletico Madrid ayaa xiisaynaya saxeexa 26 sano jirka Juventus iyo xulka Talyaaniga ee Federico Bernardeschi. (Calciomercato – in Italian)
24 sano jirka khadka dhexe ee Man United ee Andreas Pereira ayaa bar-tilmaameed u ah kooxaha Benfica iyo Valencia (ESPN)
United ayaa markale xiisaynaysa saxeexa daafaca bidix ee Juventus ee Alex Sando oo 29 sano jir ah. (Calciomercato – in Italian)
Liverpool ayaa diyaar u ah inay xagaagan iibiso khadkeeda dhexe ee Marco Grujic iyo garabkeeda ree Wales ee Wilson. (Mirror)
Tottenham ayaa doonaysa inay qaab amaah ah ku qaadato 21 sano jirka weerarka ee Liverpool ee Brewster (Football Insider)